Lalao baolina fanatanjahantena
Ny lalao malaza indrindra, be mpankafy sy be mpanaraka dia efa nampiasaina hatramin'izao amin'ny alalan'ny baolina. Ny lalao ara-panatanjahatena miaraka amin'ny baolina dia nalaina tao amin'ny tsangambato ejipsiana fahiny, mampiseho ny olona manenjika, mandalo foto-kevitra iray. Ary tena marina, ny fototry ny ankamaroan'ny lalao ara-panatanjahantena mampiasa ny fandrindrana baolina, ny fisamborana na ny fitifirana ny lasibatra, dia mbola manan-danja hatramin'izao.
Avy eo ny Grika fahiny sy ny Romanina. Tamin'ny voalohany, teny an-dalana, tamin'ny baolina dia nilalao tsy ny lehilahy ihany, fa ny vehivavy ihany koa. Marina tokoa, io resaka fanavaozana io dia tsy inona fa ny vahoaka avy any Sparta. Ary ny Romanina dia nanana karatry ny baolina maromaro - pila, follis ary paganica, ary samy manana ny tanjony manokana izy ireo.
Avy eo, nandritra ny taona maro, nihatsara ny lalao baolina - nanomboka nanamboatra miloko izy ireo, fitaovam-piadiana hikapoka ny fitaovana, sns.
Androany, efa lasa lavitra be ny zava-drehetra: lasa lalao baolina ny lalao baolina, amin'ny ankapobeny. Ary tsy manao afa-tsy ny fialam-boly ihany izy ireo, fa mazoto ihany koa, manokana ny ankamaroan'ny fotoanan'izy ireo amin'ity asa ity. Ny anton'izany fitiavan-tanindrazana izany sy ny fitiavana manerantany dia mora ny manara-maso - tena mahafinaritra ireo lalao ireo, noho izany dia mamporisika anao izy ireo hanary ny zava-drehetra ary hikapoka ny tongotrao amin'ny baolina miaraka amin'ny tsiky tsy manan-tsiny.
Misy mihitsy aza ny sokajy izay karazana baolina baolina. Ny fisarahana dia mitaky ny tanjona farany sy ny fomba fanatanterahana.
Ny voalohany, ny sokajy malaza indrindra eran'izao tontolo izao, dia lalao izay tanjona. Eto, na dia ny fandrindrana aza dia tsy hiteny - football, hockey, polo, basketball, handball (handball), baolina baolina ary maro hafa.
Ny lalao malaza indrindra amin'ity lisitra ity dia ny baolina baolina. Ny fitsipika, toy ny fampisehoana tena, dia mampientam-po - ny baolina dia tsy maintsy entina eny an-kianja amin'ny ezaka ataon'ny ekipa. Ny mahagaga indrindra dia ny haben'ny baolina - 183 santimetatra sy ny lanjany 22.7 kg!
Ny sokajy faharoa dia manipy ny baolina eo amin'ny harato. Tennis, tennis, volleyball, sns.
Fahatelo - eto amin'ny baolina dia mamono batana manokana, be loatra ka ny olona iray izay tezitra, dia nahatratra ny tanjona talohan'ny baolina. Izy no baseball, cricket ary lapta. Ity farany dia lalao Rosiana nentim-paharazana, izay tokony hokapaina miaraka amin'ny spatula vita amin'ny hazo.
Ny sokajy fahefatra - ny baolina dia tokony hitifitra ny lasibatra, miaraka amin'ny farafaharatsiny indrindra sy ny tanjona marobe (tanjona) amin'ny fitokonana. Raha mora kokoa - ny lakolosy , billiards, golf.
Ny sokajy fahadimy dia lalao mahagaga, izay tsy misy mpangalatra na mpandresy. Lalao, raha ny tena marina, miezaka ny manantena fa ny tena zava-dehibe dia tsy fandresena, fa ny fandraisana anjara. Ireo lalao ireo dia malaza any atsinanana - chinlon (lalao avy any Birmania) ary temari (Japon).
Lalao ho an'ny ankizy
Ny ray aman-drenin'ireo ankizy mavitrika sy mavitrika dia manontany tena hoe inona ireo lalao baolina, afa-tsy ireo izay efa lasa fialamboly an-tokotany am-bava - baolina kitra, volleyball ary basketball.
Manolotra zava-baovao marobe izahay:
"Snake" - mampianatra ny fototry ny baolina kitra io lalao io. Eto ny zanakao dia tsy milalao fotsiny ilay baolina, fa mianatra mitondra azy. Ilaina ny manisy tsipika avoitra amin'ny tany, eo anelanelan'ny 1 m avy amin'ny andaniny sy ny laharam-boninahitra, dia ilaina ny mandamina 10 singa - pikantsary, kilalao, kibay, sns. Tokony hisy andalana roa raha toa ka handamina fifaninanana tokana ianao. Tsotra ny tanjona - mila mihazona ny baolina eo amin'ny tsipika ianao, tsy misy ny fahavoazana.
"Tsidiho ny tanjona" - ny fototry ny lalao dia ny manomana ny ankizy hianatra fitsipika, manipy baolina sy ny foibe. Eo amin'ny haavon'ny haavon'ny maso, mila mamily ny tady ianao ary manantona tanjona boribory eo amboniny - diametre 30 cm, ny loko maivamaivana araka izay azo atao. Ny ankizy dia mirefy 3 m eo ho eo, eo anoloany misy harona misy baolina kitra efatra. Ny tanjona dia ny hamelezana ny isa imbetsaka indrindra eo amin'ny lasibatra, ary mila avoaka in-4 ianao amin'ny tanana tsirairay.
Akanjo ho an'ny skiing
Skiing - inona no ilainao amin'ny skiing?
Fampianarana ara-batana any am-pianarana
Dysentery - soritr'aretina eo amin'ny ankizy sy ny fitsipika momba ny fitsaboana
Kitapo mofo ao anaty mofo - recipe
Bouillabaisse - fomba fanamboarana lasopy frantsay tsara tarehy
Ny varavarana am-baravarana avy amin'ny hazo kesika
Kitapo mena - ahoana no hampifangaroina sy amin'ny akanjo?
Famaritana ny familiana amin'ny fifindrana
Nandany sekely an-tapitrisany dolara i George Michael
Souffle ao amin'ny oven mikrofo
Voankazo voarara avy amin'ny crusts mandarinina
Fandinihana ny toxoplasmosis
Sakafo miaraka amin'ny tsy fahazakana laktose
Inona no dikan'ny hoe Olesya?
Prednisone - ny vokany
Hypoplasia ny tranonjaza